(Resa i Stockholms län)
Gaadiidka Wakaaladda gaadiidka Stockholm waxaad ugu safri kartaa meel walba oo ka tirsan gobolka Stockholm. Waxaad tusaale ahaan ka soo safri kartaa Norrtälje ama Roslagen oo dhanka waqooyiga ku taal oo aad u safri kartaa skärgården oo dhanka bariga ku taal. Waxaana lagu safri karaa gaadiidka ay ka mid yihiin tareenka dusha mara, basaska magaalada, basaska gobolka, tareenka dhulka hoostiisa mara iyo tareenada kale (oo ay ka mid yihiin Tvärbanan, Roslagsbanan iyo Saltsjöbanan).
Waxaa tigidhada laga goosan karaa saldhigyada tareenada dusha iyo kuwa hoos mara, laakiin waxaa raqiisan in horay loo sii goosto. Waxaa jira tigidhyo lagu goosan karo sms. Waxaa kaloo jira kaarka bisha, kaarka saddexda maalmood, kaarka sannadka iyo kaarka xilliga oo afar bilood shaqaynaya (månadskort, tredagarskort, årskort iyo säsongskort). Basaska dushooda lagama goosan karo tigidho ee waa in horay loo sii goostay inta baska la soo korin.
Qofka da’diisu ka yar tahay 20 sano ama ka weyn tahay 65 sano, wuxuu ku raacayaa qiimo la dhimay. Taas micneheedu waxa weeye waa ay ka raqiisan tahay haddii SL lagu safro.
Carruurta da’doodu ka yar tahay 7 sano oo la socda qof qaangaar ah oo tigidh haysta waxay ku raacayaan bilaash. Sabtida iyo axadda iyo waqtiyada ciidaha waxay carruurta da’doodu u dhexeyso 7 ilaa 12 sano ku raacayaan bilaash haddii qof weyn oo tigidh haystaa la socdo. Qofka qaangaarka ah oo wata gaariga carruurta wuxuu basaska Stockholm badankood ku raacayaa bilaash ama lacag la’aan.
Qofkii raaca isagoo aan tigidh wadan waa la ganaaxayaa.
Saldhigyada Stockholms tunnelbanestationer waxaa ka buuxa farshaxan isugu jira sawiro gacanta laga sameeyey iyo farshaxan la qoray. Mararka qaarkood waxaa la qabtaa daawasho lagu soo marayo farshaxanka saldhigyada tunnelbanan.
Warbixin dheeraad ah iyo adeeg gaar ahba waxaa laga xiriiri karaa iyadoo booqasho lagu tago xarunta SL-center. Waxay xarumahaasi tusaale ahaan ku kala yaalliin T-centralen, Slussen, Fridhemsplan, Gullmarsplan iyo Tekniska högskolan.
Baabuurta ka diiwaangeshan dalka Iswiidan oo soo gala ama ka baxa gudaha Stockholm maalmaha shaqada saacadaha u dhexeeya 06.30-18.29 waxaa laga qaadayaa khidmad lagu magacaabo trängselskatt. Khidmaddaasina waa kala geddisnaan kartaa taas oo ku xiran hadba waqtiga la safrayo. Wax trängselskatt ah lama bixinaayo maalmaha sabtida, axadda iyo maalinta ka horreysa maalmaha ciidda iyo bisha luulyo.
Waxaa baabuurta si awtomaatiig ah loogu diiwaangeliyaa saldhigyada ay magaalada ka soo galaan oo khidmadda lagu bixiyo. Transportstyrelsen [Hay’adda gaadiidka] ayaa waxay qofka baabuurka leh u dirtaa kharashka bil walba dhammaankeeda.
Saldhigga weyn Centralstationen ee Stockholm waxaa ka baxa tareeno isaga safra meelo kala duwan oo dalka Iswiidan ka tirsan iyo dalal dibedda ah. Waxaa mararka qaarkood dhacda in tareenadaas laga kori karo loogana degi karo saldhigyada Sundbyberg iyo Flemingsberg.
Shirakadaha gaarka ah ee basaska
Waxaa jira shirkado basas oo gaar dad u leeyihiin oo isaga kala safra meelo kala geddisan oo dalka Iswiidan ka tirsan iyo dalal dibedda ah. Basaskaa badankood waxay ka baxaan Cityterminalen oo ku taal bartamaha Stockholm.
Garoomada diyaaradaha ee Stockholms ugu dhow waxay kala yihiin Arlanda iyo Bromma flygplats.